စားမြဲ၊ ဝါးမြဲ၊ ဘာမှမပြောင်းလဲ သေးတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှ ကြံ့ဖွံ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အာဏာပိုင်များ .(တိုင်ကြားစာ) ~ ဒီမိုဝေယံ
စားမြဲ၊ ဝါးမြဲ၊ ဘာမှမပြောင်းလဲ သေးတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှ ကြံ့ဖွံ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ အာဏာပိုင်များ .(တိုင်ကြားစာ)
ကရင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဇော်မင်းနှင့် ဇနီး
ဘာမှမပြောင်းလဲ သေးတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်
ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းမီဒီယာတွေမှာ ရေးသားအသံလွှင့်နေတာတွေကော အာဆီယံအကြီးအကဲများ၊ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အကြားမှာ ပြောနေကြတာတွေကော နိုင်ငံတော်အစိုးရ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရဟာ အပြောင်းအလဲ စနေပြီ ပြောင်းလဲနေပြီလို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာအနေနဲ့လည်း ရှေ့ကိုဆက်သွားပြီး နောက်ပြန်မလှည့်စေရန်လည်း ၀ိုင်းဝန်းထိန်းကြောင်းနေကြပါတယ်။ မည်သို့ပင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ပြောင်းလည်း နေစေသော်ငြားလည်း ကရင်ပြည်နယ် အတွင်းမှာတော့ ယနေ့အချိန်အထိ န၀တ၊ နအဖ လက်ထက်ကအတိုင်း ဘာမှ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ ပြောင်းလဲဖို့လည်း ပြည်နယ်အစိုးရမှ စိတ်ကူးမရှိကြပါဘူး။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဆိုသူကလည်း၊ အခြားပြည်နယ်တိုင်းကဲ့သို့ မဟုတ်ပဲ ယခင် ပယကဥက္ကဌ ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇော်မင်းကနေ ဦးဇော်မင်း ဆိုပြီး ဘောင်းဘီချက်ချင်းချွတ်ပြီး တိုက်ပုံနဲ့ပုဆိုး ကောက်ဝတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယနေ့အချိန်အထိ အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ လူမှုရေး အားလုံး၏ လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးလိုလိုမှာ နဂို အာဏာရှင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတိုင်းပါပဲ။ အောက်ခြေ ပညာတတ်၊ ပညာရှင် ၀န်ထမ်းတွေအပေါ် မောက်မာနေဆဲပါပဲ။ ကရင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပြီး ဘားအံ၊ ကော့ကရိတ်နှင့် မြ၀တီ ကားလမ်းတစ်လျှောက် သစ်တောမြေတွေကို စိုက်ပျိုးမြေပြောင်း၊ စိုက်ပျိုးမြေကနေ လန(၃၉)မြေယာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပြောင်းပြီး မြေကွက်တွေကို လပ်ယူပြီး ဖော်ထုတ်နေပါတယ်။ နေစရာအိမ်မရှိတဲ့ ဆင်းရဲနွမ်းပါတဲ့ ပြည်သူတွေကို အတည်တကျနေထိုင်ရန် စီစဉ်လုပ်ကိုင် ပေးခြင်းမရှိပါဘူး။ သူတို့ အစိုးရအဖွဲ့တွေ ရောင်းစားဖို့ မြေတွေပဲ ဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ ပြည်နယ်အစိုးရမှာရှိတဲ့ ၀န်ကြီးတွေကလည်း ပညာအရည်အချင်းနဲ့ အသိပညာခေါင်းပါးတာကြောင့် ပြည်နယ်တိုးတက်ရေး၊ ပြည်သူလူထု စားဝတ်နေရေးချောင်လည်ပြီး အာမခံချက်ပေးနိုင်သော စီးပွားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ တွန်းတင် ပေးနိုင်ခြင်းလည်း မရှိကြဘူး။
ဘာလုပ်ရမှန်းလည်း အကြံဥာဏ်မရှိသလို လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်လည်းမရှိကြပါဘူး။ ၀န်ကြီးဆိုပြီး ပညာတတ်၊ ပညာရှင်ဝန်ထမ်းကြီးတွေအပေါ် ဖြစ်ညှစ်၊ ညစ်ပြီး သူတို့ကို ဂါရ၀ပြုလာရန် လုပ်နေတဲ့ ၀န်ကြီးတွေလည်း ရှိနေကြပါတယ်။ ကြံရာမရတဲ့အချို့ ၀န်ကြီးတွေကလည်း သူတို့ရွေးကောက်ပွဲမှာ မဲနိုင်ပြီး တက်လာတဲ့ နယ်မြေတွေမှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တွေအပေါ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တာဝန်ဆက်လက် တာဝန်ထမ်းဖို့အတွက် သူတို့လုပ်ပေးရင်ဖြစ်တယ် ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး တွေထံ ဆပ်ကြေးကောက်သလို လိုက်လံတောင်းစား နေကြပါတယ်။ စည်ပင်ဝန်ကြီးဆိုတဲ့ ၀န်ကြီးကလည်း အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေ အပေါ် ဖြစ်ညှစ်နေလို့ လမ်းတွေ မခင်းနိုင်ပါဘူး။ ၀န်ကြီးညှစ်လို့ ကတ္တရာတွေလည်း လျှော့ဝယ်နေရတယ်လို့လည်း ၀န်ထမ်းအသိုင်းအ၀ိုင်းထံမှ အသံထွက်နေပါတယ်။
မဲဆောက်မှ မြန်မာပြည်သို့ တင်ပို့မည့် Without မော်တော်ယာဉ်များ
ပါတီက တပည့်တပန်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီး Without မော်တော်ယာဉ်များ ပို့ဆောင် လုပ်စားနေကြပါတယ်။ ၀န်ကြီးတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်မရခင်က မိမိတို့လက်ထက်မှာ ကောင်းအောင် ဘာတွေ လုပ်ပစ်မယ်ဆိုပြီး ကြိမ်းဝါးခဲ့ပေမဲ့လည်း တကယ်တော့ အတတ်ပညာ၊ အသိပညာ နည်းပါးတာကြောင့် တကယ်ဝန်ကြီး ဖြစ်လည်းသွားရော ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေကြတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ (၅)နှစ်အတွင်း မိသားစုအတွက် တွက်ချေကိုက်မည့် အလုပ်တွေကို ဦးစားပေးလုပ်လာကြတယ်။
ပြည်နယ်အတွင်းမှာ မှီခိုနေတဲ့ ပြည်သူအများစုအနေနဲ့ ၀န်ကြီးတွေ၊ ဘာတွေ၊ နိုင်ငံရေးတွေကို စိတ်မ၀င်စားကြပါဘူး။ မြ၀တီ-မဲဆောက် ချစ်ကြည်ရေးတံတားဖွင့်ဖို့ပဲ စိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ချစ်ကြည်ရေး တံတားအပေါ် မှီခိုလုပ်ကိုင် ကူးသန်းသွားလား လုပ်ကိုင်စားသောက် နေကြရတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ကြည်ရေးတံတား ပိတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက် စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းကြသလို ပြည်နယ် တိုးတက်ရေးအတွက် ရရှိမဲ့ ကုန်စည်ဖြတ်သန်းခ၊ အကောက်အခွန်အခများလည်း နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဆုံးရှုံးနေရပါတယ်။ ချစ်ကြည်ရေးတံတား ပိတ်ထားတဲ့အတွက် လက်တစုပ်သာရှိတဲ့ မှောင်ခို စီးပွားရေးသမား များကတော့ နှစ်သက်ကြသလို မှောင်ခို စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းကို အားပေးနေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေ အတွက်ကတော့ အရမ်းကြိုက်နှစ်သက် ကြပါတယ်။ ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့ ၀င်ငွေများ ကျဆင်းသလို ပြည်နယ်ကို အုပ်ချုပ်နေတဲ့ အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ကောက်ခံနေတဲ့ ၀င်ငွေဟာ နေ့စဉ် တိုးတက်နေပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ချစ်ကြည်ရေးတံတား မဖွင့်နိုင်ဖို့အတွက် ဆုတောင်းနေကြမှာပါ။
ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်သူလူထုတွေထံမှ အခွန်အတုတ်များကို နှစ်စဉ်ကောက်ခံနေပေမဲ့ ပြည်နယ် အတွင်းနေထိုင်တဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် လမ်းတံတား၊ ကျန်းမာရေးက အစ ဘာမှပြန်လုပ် ပေးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ လမ်းတွေဆိုလည်း အလွန်ပျက်စီး နေပါတယ်။ အာဏာပိုင်ရဲ့ ကျောထောက်နောက်ခံဖြစ်တဲ့ ဘားအံ-မြ၀တီလမ်းကြောမှာ ကောက်ခံနေတဲ့ အေကေကုမ္ပဏီဆိုရင် နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းသွားလာနေတဲ့ မော်တော်ယာဉ် အစီး(၈၀၀)ခန့်ကို (၂)နှစ်ကြာနေပြီ ကောက်ခံနေသော်လည်း လမ်းကောင်းအောင် ပြုပြင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအရ လမ်းပြုပြင်ပြီး(၃)နှစ်ကြာမှ လမ်းကြေး ကောက်ခံရမည်ဟု ကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်များ ကပ်ထားသော်ငြားလည်း ဘာအတွက် ကောက်ခံသလည်းလို့ လွှတ်တော်မှာ မေးမြန်းတဲ့အခါ တံတားကြေး ကောက်ခံတယ်လို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဖြေသွားပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့ကောက်ခံနေတဲ့ တံတားဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက ချစ်ကြည်ရေး တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ တံတားဖြစ်ပါတယ်။ အေကေကုမ္ပဏီဟာ လမ်းတံတား တည်ဆောက်ပြုပြင်ရန်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှ တရားမ၀င် မော်တော်ယာဉ်များ၊ စက်ယန္တယားများကို တင်သွင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းပိုင်းရှိတဲ့ တည်ဆောက်ရေး လုပ်နေတဲ့ ကုမ္ပဏီကို ရောင်းစားနေပါတယ်။ ဒါကို အာဏာပိုင်တွေ အားလုံးသိပါတယ်။ တာဝန်ရှိတဲ့ ဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း ခရီးသွားပြည်သူတွေထံမှ ကောက်ခံတဲ့ငွေနေတဲ့ လမ်းမခင်းပဲ ပံ့ပိုးနေတာကြောင့် ဥပဒေအရ အမှန်တရားဆိုတာ ကွယ်ပျောက်နေတာကို ပြည်သူတွေသိကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကရင်ပြည်နယ် တိုးတက်စေဖို့ ပြည်နယ် အစိုးအရအတွင်းမှာ အဂတိတရား ကင်းဝေးပြီး ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်တဲ့ အဆင့်မြင့် ပညာတတ်ဝန်ကြီးများ ဖြစ်ပေါ်လာဖို့လိုပါတယ်။ ယနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံနိုင်ငံဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၄-ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံနိုင်ငံဥက္ကဌ တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်တဲ့အတွက် အဆင့်မြင့် ပညာတတ်ဝန်ကြီးများ မရှိတဲ့ ကရင်ပြည်နယ်က ပြည်သူတွေအတွက် လွန်စွာ စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်။
စစ်အစိုးရ လက်ထက်အတိုင်း မြင်တွေ့နေရတာကြောင့် ဘာမှ မပြောင်းလည်းဘူး ဆိုတာကို ကရင်ပြည်နယ် ပြည်သူတွေနဲ့ တိုင်းပြည်ကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးချင်တဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကို ချစ်တဲ့သူတွေကို သိရှိအောင် တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။